အလုပ်ရှာခြင်း | Samfunnskunnskap.no
နော်ဝေတွင် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း နိမ့်သည့်တိုင် အလုပ်ရရန် အကြီးအကျယ်ယှဉ်ပြှိုင်ရဖွယ်ရှိနိုင်သည်။ အလုပ်ရလိုသူသည် ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမည်။ အဆက်အသွယ်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်းကို အသုံးပြှုပြီး မိမိကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြရန် အရေးကြီးသည်။ အင်တာနက် (သို့) သတင်းစာများတွင် လစ်လပ်သောအလုပ်များကို ကြေငြာထားသည်။
သငျလုပျလိုသောအလုပျတခုတှရေ့လြှငျ လြှောကျလှာရေးကာ ကိုယျရေးရာဇဝငျတစောငျ ပေးပို့ရမညျ။ ကိုယျရေးရာဇဝငျတှငျ သငျ မညျသူမညျဝါဖွဈသညျ၊ မညျသညျ့ဘှဲ့မညျသညျ့အတတျပညာကို တတျမွောကျထားသညျ၊ မညျသညျတို့ကိုလုပျကိုငျခဲ့ဖူးသညျတို့ကို ဖျောပွလိမျ့မညျ။ သငျ့ကို လုပျငနျးရှငျထံ လူတှမေ့ေးမွနျး (အငျတာဗြူး) ရနျ ချေါယူခံရနိုငျစရေနျ အလုပျလြှောကျလှာကောငျးတစောငျကို အခြိနျယူပွီး ကကြနြနရေးရနျ အရေးကွီးသညျ။
အင်တာဗျူးသို့မသွားမီ သင့်ကိုယ်သင် ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါစေ။ ထိုလုပ်ငန်း(ကုမ္ပဏီ) အကြောင်း သိအောင်လုပ်ထားပါ။
အင်တာနက်တွင်ဖြစ်စေ ထိုလုပ်ငန်းအကြောင်းသိသူ တယောက်ယောက်ထံတွင်ဖြစ်စေ ထိုလုပ်ငန်းအကြောင်း လေ့လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကို သင် မည်သို့ဖြေမည်ကို ကြှိုတင်စဉ်းစားထားပါ။ လုပ်ငန်းရှင်က မည်သို့မေးမည်ထင်ပါသလဲ? သင်မည်သို့ဖြေပါမည်လဲ?
အလုပ်အကိုင်လျှောက်လွှာတစောင်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်သည် –
သင့်အကြောင်းအကျဉ်းချုပ် နှင့် လောလောဆယ် သင်ဘာလုပ်နေသည်
မည်သည့်အတွက် သင် ဤအလုပ်နှင့် သင့်တော်သည်
လျှောက်လွာများကို အင်တာနက်မှတဆင့် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် (သို့) အီးမေးလ် ဖြင့် ပို့လေ့ရှိသည်။
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်သည် သင်၏ ပညာအရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြှုံကို အကျဉ်းချုပ်ခြှုံငုံဖော်ပြသော မှတ်တမ်းတစောင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်တစောင်တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်သင့်သည် –
အလုပ်လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း(အင်တာဗျူး) အတွက် သိထိုက်သည်များ
အင်တာဗျူးဝင်ရန်ရှိလျှင် ကြှိုကြှိုတင်တင်ထွက်ပါ။ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းဌာန မည်သည့်နေရာတွင်ရှိပြီး မည်သို့သွားရောက်နိုင်ကြောင်းလေ့လာထားပါ။
မည်သည့်အဝတ်အစားများဆင်ယင်မည် မည်သို့သော ဥပဓိရုပ်များပေါ်လွင်စေရမည်ကို စဉ်းစားထားပါ။
ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြည့်ခြင်းတို့သည် အရေးကြီးပြီး နည်းစနစ်ကျသည်။
အကောင်းမြင်ပါ၊ ပြှုံးပါ၊ အင်တာဗျူးတွင် သင်စကားပြောနေသူများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင် ကြှိုးစားပါ။